ဝိညာဉ်ရေးရာ အန္တရာယ်များ by Dag Heward-Mills
Price: $15.00 USD. Words: 9,000. Language: Myanmar (Burmese). Published: May 7, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Spiritual Growth
ခရစ်ယာန်တစ်ဦးသည် ထောက်ချောက်တွေ၊ ကျော့ကွင်းတွေနှင့် အန္တရာယ်ကြားမှာ လျှောက်လှမ်းနေတယ်။ ဒီစာအုပ်က ကျွန်ပ်တို့ကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ဖျက်စီးဖို့ရန်၊ ထိခိုက်နာကျင်စေဖို့ရန်နှင့် အနာတရဖြစ်စေတဲ့အန္တရာယ်ထဲက အဖြေရရန် သင့်မျက်စိကို ဖွင့်ပြပေးလိမ့်မယ်။ ဒီစာအုပ်အားဖြင့် ဝိညာဉ်ရေးရာလျှောက်လှမ်းချိန် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကူညီပါ၊ ကယ်တင်ပါ။
ကြားနာခြင်း၏ စွမ်းရည် by Dag Heward-Mills
Price: $10.00 USD. Words: 17,200. Language: Myanmar (Burmese). Published: May 6, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Spiritual Growth
ဘုရာသခင်၏စုံလင်သောအလိုတော်အတွင်း ရှိနေခြင်းထက် ပို၍အရေးကြီးသော ခေါင်းစဉ်မရှိတော့ပါ။ ဧ၀ံဂေလိသာဿနာများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သောအရာတစ်ခုမှာ ဘုရားသခင်၏အသံတော်ကို နားထောင်ခြင်း၏ အရည်အချင်းဖြစ်သည်။ စုံလင်သော ဘုရားသေခင်၏အလိုတော်အတွင်း သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ အသံ တော်ကို နားထောင်ခြင်းသည် မည်မျှအရေးကြီးသနည်း။ ဘုရားသခင်၏စုံလင်သောအလိုတော်၌ သင်ရှိနေသော အခါ သင်သည်ကြီးပွားတိုးတက်ပြီး ဘုရားသခင်အတွက် သင်ဆန္ဒရှိ
Price: $9.99 USD. Words: 8,890. Language: Chinese (simplified). Published: April 18, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Spiritual Growth
历史是一面镜子，是引领我们前往与神相交深处的阶梯， 本书将带你浅尝二千年来大公基督教会灵修传统的丰富， 挑旺你对主耶稣基督的饥渴和爱慕…… ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 本书以故事及叙述的方式，生动地介绍基督教历史上一些著名的灵修人物，把他们的生平和理念活泼地呈现在读者面前。与这些属灵先驱们相遇，将令你被他们灵魂的炽热与深邃所感染和震撼，也将让你受到他们生命智慧的启迪、及他们刚毅品格的激励。这些圣徒将成为你属灵旅程的良伴，他们竭力追求神的各种经验、洞见和忠告，将成为你寻求基督路上的亮光与导引，也将让你更真切地感悟到上帝的慈爱、良善与奥妙。无论你是初信或成熟的基督徒，或是对属灵生命感兴趣的非信徒，本书都适合你阅读。愿在这些属灵伟人灵魂中燃烧的爱火，也在你心中点燃起渴慕爱神的烈焰！（字数：11万）
Price: $9.99 USD. Words: 9,780. Language: Chinese (simplified). Published: April 18, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Spiritual Growth
历史是一面镜子，是引领我们前往与神相交深处的阶梯， 本书将带你浅尝二千年来大公基督教会灵修传统的丰富， 挑旺你对主耶稣基督的饥渴和爱慕…… ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 本书以故事及叙述的方式，生动地介绍基督教历史上一些著名的灵修人物，把他们的生平和理念活泼地呈现在读者面前。与这些属灵先驱们相遇，将令你被他们灵魂的炽热与深邃所感染和震撼，也将让你受到他们生命智慧的启迪、及他们刚毅品格的激励。这些圣徒将成为你属灵旅程的良伴，他们竭力追求神的各种经验、洞见和忠告，将成为你寻求基督路上的亮光与导引，也将让你更真切地感悟到上帝的慈爱、良善与奥妙。无论你是初信或成熟的基督徒，或是对属灵生命感兴趣的非信徒，本书都适合你阅读。愿在这些属灵伟人灵魂中燃烧的爱火，也在你心中点燃起渴慕爱神的烈焰！（字数：13万）